Onye isi ala Egypt nyere iwu ka ndị njem nlegharị anya 'kwalite "iji gosipụta akụkọ ihe mere eme na mmepeanya nke Egypt"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Onye isi ala Egypt nyere iwu ka ndị njem nlegharị nlegharị anya 'kwalite "iji gosipụta akụkọ ihe mere eme na mmepeanya nke Ijipt"
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • investments • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye isi ala Egypt nyere iwu ka ndị njem nlegharị nlegharị anya 'kwalite "iji gosipụta akụkọ ihe mere eme na mmepeanya nke Ijipt"
Onye isi ala Egypt Abdel Fatah al-Sisi nyere iwu ịkwalite ebe ndị njem nlegharị anya na mba niile, n'ụzọ na-egosi akụkọ ihe mere eme na mmepeanya nke mba ahụ.
Nke a mere n'oge nzukọ Sisi na Mịnịsta Ala Mostafa Madbouli na Mịnịsta nke Antiquities Khaled al-Anani, dị ka ọnụ na-ekwuchitere onye isi ala bụ Bassam Radi si kwuo.
N'ime nzukọ ahụ, Onye isi ala Sisi rụtụrụ aka na atụmatụ ahụ iji nyefee ozu ndị eze sitere na Tahrir's Museum Museum na National Museum of Egypt Civilization na Cairo's Ein as-Seirah, na-ekwusi ike mkpa ọ dị igosipụta ihe omume dị otú a n'ụzọ kwesịrị ekwesị nke kwesịrị oge ochie nke Egypt .
Onye ama ama na Egypt na-amụ banyere ihe mgbe ochie gosipụtara na mbụ ga-ebufe ozu ahụ na National Museum of Egypt Civilized na nnukwu usoro na June 15.
A na-eche ozu ndị ahụ maka ndị eze Ijipt ochie bụ Amenhotep I, Thutmose I, Thutmose II, Thutmose II, Ramses I,, Ramses II, Ramses III, na ndị ọzọ.
Anani nyochara mmelite kachasị ọhụrụ gbasara nchọta ihe ochie na nso nso a wee tụlee mbọ ndị mịnịsta na-agba iji weghachi ihe ochie ndị Ijipt zoro ezo na mba ọzọ. Ọ rụtụrụ aka na ngosipụta ndị Egypt haziri na mba ndị ọzọ gụnyere ihe ngosipụta oge “King Tut: Treasure of the Golden Pharaoh” na Paris nke e hiwere na May iji gosipụta akụ nke Eze Tutankhamun nke ndị Ferono.
Ọ gwakwara onye isi ala banyere mmelite nke ọrụ ndị mịnịstrị ahụ mejuputara gụnyere mmelite nke Giza Plateau, National Museum of Egypt Civilization, na Baron Empain Palace na Cairo's Heliopolis.
Ọzọkwa, onye ozi ahụ tụlere mbọ iji kwalite ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie na mba niile gụnyere Mohamed Ali Palace na Shubra, iyalọ Nzukọ Eliyahu Hanavi na Alexandria, na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na Kafr al-Sheikh na Tanta.
Cairo mmepeanya ngosi na mbụ mgbalị Egypt Ijipt ihe ngosi ihe ngosi Giza ọlaedo nketa Ihe pụtara ìhè akụkọ ihe mere eme II III mkpa arara mara June eze Eze Tut eze ọhụrụ nzute onye ozi ozi Mohamed ngosi nka ihe ngosi nka Ihe ngosi nka Mba nile nyere iwu iwu Obí Nme Paris plan Plateau president Prime onye isi ala oru ngo -adịbeghị anya dịghachi kpughere eze Sheikh nwa oge Mịnịsta Ozi Mba ebe nlegharị anya nyefe akụ mmelite upgrade nlele ụzọ Zahi Hawass